သီတင်းကျွတ်ပြန်ပေါ့ …… (အဝေးရောက်များအတွက်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သီတင်းကျွတ်ပြန်ပေါ့ …… (အဝေးရောက်များအတွက်)
သီတင်းကျွတ်ပြန်ပေါ့ …… (အဝေးရောက်များအတွက်)
Posted by fatty on Oct 12, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 28 comments
ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် တခြားတိုင်းတပါးရောက်နေရင် ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာကို သတိရကြတာပါဘဲ။ ကျနော့တုန်းကတော့ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရပါတယ်။
ပိတ်စတွေအရောင်ဆိုးတဲ့စက်ရုံမှာပါ။ မြန်မာသီချင်းလေးအားကိုးပြီးလုပ်ရပါတယ်။ အခုလဲ အဝေးရောက်များများအတွက် အလွမ်းပြေ
အထောက်အကူဖြစ်ပါစေဆိုပြီး ငယ်ငယ်ကကြုံခဲ့ရတဲ့ သီတင်းကျွတ်လမ်းဘေးပွဲတော်လေးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအပ်ါပုံထဲကလိုပါဘဲ ကြော်ကြလှော်ကြ ရောင်းကောင်းကြပါတယ် ..။ မိုးက အခုမှကင်းစင်သွားတာကိုး။ လူတွေလဲ ပွဲငတ်နေတာ
ကြာပြီလေ …။ ဟိုးဟို ….တုန်းကပေါ့ ကမာရွတ်ကနေအောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမကြီးတလျှောက် ဘာပြောကောင်းမလဲ
ကြိတ်ကြိတ်တိုးဗျား … လူချင်းဆိုတာ ပွတ်ပြီးသွားရတယ် ..။ဒီဘက်ပွတ်လိုက်မလွတ်ရင်ဟိုဘက်လှည့်ပေးလိုက်နဲ့ …။
ကဲပါလေ …. ပုံတွေဘဲ ဆက်အားပေးကြပါအုံး …။
၀မ်းနည်းစရာကတော့ ဗန္ဓုလဦးထုပ်လေးတွေ ဓါးလေးတွေ စက္ကူမျက်နှာဖုံးလေးတွေမတွေ့ရတော့ဘူး
မိုးကြောင့်မလာတော့တာလား သူတို့နေရာမှာ နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ ပူဖောင်းတွေဝင်လာလို့ဘဲလား။
ပြီးတော့ …. သီတင်းကျွတ်ပြီမောင်ရယ် .. လို့ပြောမှာလား …
…………သီတင်းကျွတ်ပြီ မ ရယ် …. လို့ပြောမှာလား ….
နှစ်ယောက်လုံးက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြမှာလား ……..။
………………. ရွှင်လန်းချန်းမြေ့ကြပါစေ …………
Zaw oo has written 351 post in this Website..
i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising asaproducer and have trading- company-experiences as well.
View all posts by fatty →
တစ်ခါမှ မလည်ဖူးလို့ လားမပြောတတ်..
ဒီမှာ..သတင်းကျွတ် ဘယ်လောက်စည်သလဲဆိုတာ..ဦးဖတ် ပုံတွေနဲ့ တင်..သိသာပါပြီနော့်
ကျနော်တော့ ဂဏန်းကြော်နဲ့.ဆလက် ရွက်ကို သရေကျနေဘီ..
ဂဏန်းကြော် ရဲ့ ဗိုက်ထဲက အနီတွေက ဂျုံကို ဆေးနီလုပ်ပြီး ကပ်ထားတာ.. ဂျုံ မဟုတ်ရင် ဆန် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အတုတွေ.. တခါ ထိပြီးပြီ.. လူတွေ အကျင့်ပျက်နေကြတာတော့ ပြောမယုံ ကြုံဖူးမှ သိလိမ့်မယ်။
ဦး fattyေ၇
ကျွန်တော် က မန်းတလေးကျောက်တော်ကြီး ဘု၇ားကြီး၇ဲ့ ပွဲဈေးတန်းပုံလေးတွေ တင်မလို့ စုနေတာဗျ။
အဝေးရောက် မြန်မာများ အတွက် အလွမ်းပြေပေါ့ ဗျာ ။
အခု ဦးဖက်တီးတင်လိုက်တော့ လဲ
အလွန်ကောင်း ပြီး သရုပ်ပေါ်တဲ့ 
ဂဏန်းကြော်တော့စားချင်လာပြီ။
ဦး fatty ..ဇာဇာ ရတနာ တို့ ပွဲကော သတိမရဘူးလား … ဟဲဟဲ ..
ဦးဖက်ရယ် ဥပုသ် ယူထားပါတယ်ဆိုမှ ဒါတွေလာပြရသလား……ပုတီးကို ဂဏန်းကြော် ဂဏန်းကြော် လို့ စိပ် နေရ အောင်လုပ်တာ…
အရင် အင်းစိန်မှ ရှိတဲ့ လွပ်လပ်ရေး ကွင်းက ပွဲတွေ ကို လွမ်းမိတယ် ခုမရှိတော့ဘူး ဖျက်လိုက်ကြပီ….
လွမ်းလိုက်တာဗျာ။ ဂဏန်းကျော်လေးကို အချဉ်ရည်လေးတို့ပြီး လွေးချင်လိုက်တာ။ အမဲအူပြုတ်ဆိုင်လေးကော မတွေ့ဘူးလား လေးဖက်ရဲ့။
မြန်မာပြည်မှာ Jumping Castle တွေတောင်ခေတ်စားနေပြီနော် ။
တစ်ခါစီး ဘယ်လောက်လဲ ။
Aussie မှာ ၁၅ မိနစ်ကို ဒေါ်လာ ၂၀ လောက်ပေးရတယ် ။
ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ says:
သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုတော့လည်း ဘာအစီအစဉ်မှ မရှိသေးတော့
လူချင်းဆိုတာ ပွတ်ပြီးသွားရတယ် ..။ဒီဘက်ပွတ်လိုက်မလွတ်ရင်ဟိုဘက်လှည့်ပေးလိုက်နဲ့ …။
ဒီလကုန်ဆို.. တစ္ဆေကြီးပွဲပဲ.. ခေါ်မလား..။ Halloween ယူအက်စ်မှာ လာတော့မယ်..။
ဦးနေ၀င်းရှိစဉ်က… အင်မတန်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့.. ဟောလိဝုဒ်က Halloween ပွဲသွားကြည့်ပြီး..
ဒီမှာ သတင်းပုံ ပြန်လာတင်ပေးမယ်နော…။
အဲ့ဒီနေရာကတော့ … အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း (ယခင် အာစီသရီး) ကျောင်းဝင်း အရှေ့ဘက်ခြမ်းပါပဲ … ။ သံဃာ့ဒါန ဆွမ်းလောင်း အသင်းရဲ့ (၂၃)ကြိမ်မြောက် .. ဆွမ်းဒါန အောင်ပွဲနှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှုပွဲရဲ့ ပွဲဈေးလေးပါပဲ … ။
etone တောင် သူငယ်ချင်းတွေခေါ် လို့ ပါသွားသေးတယ် .. ဓါတ်ပုံလေးတွေလည်း ရိုက်လာပါရဲ့ .. ဒါပေမယ့် ..လေးဖက်ကြီး လက်ဦးသွားပြီ ဟီး ဟီး
ညက ဥပုသ်စောင့်ထားလို့ ဘယ်မှ မသွားတော့တာ.. ဒီညတော့ လျှောက်ပတ်ကြည့်လိုက်အုန်းမယ် ရှိသေးလားတော့မသိဘူး။
အစ်မရေ … လူအုပ်ထဲသွားလျှင် သတိထား … လူတွေက ရောသော ပေါသောနဲ့ … အရမ်းစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ် … ဒီကြားထဲ လက်သရမ်းတဲ့လူကလည်း ပါသေးတယ် … ကားပိုက်နှိုက်ထက် လက်မြန်တယ် … သံချပ်ကာဝတ်လျှင်ဝတ် .. မ၀တ်လျှင် တကိုယ်လုံး ပန်ကာဒလက်တက်ပြီး သွားမှ လုံခြုံမယ် … ။
ဘရိတ်ဓါး တချောင်းဆောင်သွားလိုက်မယ်.. အနားကပ်တာနဲ့ ဓါးနဲ့ လှီးပလိုက်မယ်.. ဘာနဲ့ လာကပ်ကပ် အပြတ်ပဲ ဟိဟိ.. ဒါဆို အဆင်ပြေနိုင်မယ် ထင်တယ်။
thit min says:
Joseph Schumpeter ပြောခဲ့တဲ့ Creative destruction
အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ကြီးမှာ ရုပ်နာမ်သဘာဝအကြောင်း မဆင်ခြင်ဘဲ သူများအသက် ဂဏန်းကျော် စားဖို့စဉ်းစားနေကြသလား…ဩော်.. ဘုရားတောင် လက်မြောက်ထားရတဲ့ လူဒွေ..
ဦးဖက် တယ်ပျောက်နေပါလား။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်ထွက်လာတာတော့ ဟုတ်ပါဘူးနော်..
ကျနော်ကတော့ သီတင်းကျွတ်ပြီ အမေဆိုပြီး မုန့်ဖိုးပဲတောင်းချင်တယ်
မီးရှူးမီးပန်းဖေါက်တာလည်းလင်းထိန်နေတာဘဲ။မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား မြန်မာပြည်ကပွဲတော်
နေရာက ကြည့်မြင်တိုင် RC3နားမှာပါ …။
မန္တလာသူခင်ဗျား .. ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပွဲတော်လဲတင်ပေးစေလိုပါတယ်။
အင်းစိန်လွတ်လပ်ရေးကွင်းမှာလှေစီးရတာလေးကို ပျော်မိပါရဲ့ခင်ဗျာ ….။
ကိုခိုင်ရေ ကျေးဇူးဗျို့ အဲဒီပွဲမျိုးမနွှဲဘူးပေမဲ့ ဓာတ်ပုံကြည့်ရရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာ ..။
ဂျပန်ကမိတ်ဆွေခမြာ.. ရွှေငါးတွေချည်းရောင်းနေရလို့.. တခြားကားတွေဘာလို့မ၀ယ်သလည်း.. ဦးနှောက်ခြောက်ပြီး လာမေးနေလေရဲ့..
ကန့်သတ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကားကောင်းမို့ ရွှေငါးချည်းပဲ ဖြစ်နေတာပါ။ Wagon တွေ သွင်းလို့ မရပါ။
ဦးဖက်တီး ပွဲတော် ပုံများထဲက
ဂဏန်းကြော်တွေ နဲ့ ပုံကို
သီတင်းကျွတ်ရင် ဗျောက်အိုးသံကြားရတာစိတ်အညစ်ဆုံးဘဲ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာလဲ ဆူညံလိုက်တာမှ အိမ်ထဲမှာနေရင်း ဗျောက်အိုးသံကြားတိုင်း လန့်ရလွန်းလို့ ရောဂါဖြစ်တော့မယ်။ ပွဲဈေးတန်းတော့ လျှောက်လည်ချင်ပေမဲ့ ရန်ကုန်မှာ ဘယ်နားပွဲရှိမှန်းမသိတာ
သီတင်းကျွတ်မှာ အပျော်တွေကို သိပ်မခံစားရတော့ဘူး
ရေမုန့်သည်တွေလည်း ရှိတယ်လေ။ လေးဖက်ကြီးက မရိုက်ခဲ့ဘူးလား။ ဒီလိုမှန်းသိ လေးဖက်ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး မုန့်ဝယ်ကျွေးခိုင်းပါတယ်။ ရောက်တော့ ရောက်ခဲ့တယ်။ ဓာတ်ပုံတော့ လူတွေအရမ်းရှုပ်နေလို့ မရိုက်ခဲ့ဖူး။
ရေမုံ့သည်ရော တခြားအသည်တွေရော အကုန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ် …။
ဒါပေမဲ့ ကွန်နက်ရှင်က တခါတင် တရေးနိုးလိုက်ဖြစ်နေတာမို့ ….. သီးခံခွင့်လွှတ်ကြပါ။
သီင်္တင်းကျွတ်ညလေးတစ်ည ပြန်လည်ကာ သတိရမိပါတယ် … မီးကလေးတွေထွန်းတော့စည်ပါတယ် … လမ်းထဲမှာကွယ် … ချစ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် ယောင်လည်လည်တစ်ဦးတည်းလျှောက်ကာလည် အတွဲလေးမရှိဘူးပေါ့ သမင်လည်ပြန် ခဏခဏ လှည့်ကြည့်တယ် …. … နောက်နှစ်တော့ အဲ့ဒီယောင်လည်လည်ကောင်လေး နဲ့ လျှောက်လည်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ဟီးဟီး
ဂဏန်းကျော်တွေကြည့်ပြီး သွားရေတောင်ကျတယ် ကျွန်တော်က ဂဏန်းအရမ်းကြိုက်တာ